orinasa mpanao mofomamy, mpamatsy - Mpanamboatra birao mofomamy any Sina
rakotra boaty miforitra mifono
sakafo kilasy FBB.SBS
GC1 be indrindra. GC2
taratasy / tabilao kanto mifono
Taratasy / tabilao kanto C1S
Taratasy / tabilao kanto C2S
tabilao kanto be indrindra
taratasy offset / kopia
Taratasy biodegradable mifono bio
boaty taratasy mihombo
Nataon'i EPP taratasy kaopy
Taratasy kaopy mifono PE
taratasy kraft / PE mifono
Vokatra taratasy vita
taratasy kanto mifono
Kitapo fihinana sakafo vita amin'ny laoniny tsy azo ovaina ...
Kalitao tsara ambongadiny sinoa logo namboarina namboarina ...
taratasy fonosana voaporofo momba ny menaka haingam-pandeha vita pirinty
Factory ambongadiny sakafo ambaratonga foil taratasy namboarina s ...
Taratasy biodegradable mifono PLA mifono Bio 100% ...
Manokana taratasy manonta offset pirinty nopetahany takela ...
Taratasy birao fanadinana voaverina miaraka amin'ny manuf miverina volontany ...
Super C1S mivalona Box Box / GC1 ivory board / High B ...
OEM ambony kalitao ivory sokajy sakafo ivory board / FBB / SBS Board ...
Reputation tsara ho an'ny mpampiasa C1s Ivory Board - Recycled ...
Taratasy offset an'ny mpanondrana 8 taona ho an'ny kahie - Top Qua ...
Factory ambongadiny sakafo ambaratonga foil taratasy Customi ...
Ento ho fantatrao ny “revolut green ...
Ny fiantsenana an-tserasera sy an-tserasera dia hiaraka amin'ny fonosana marobe. Na izany aza, ny akora tsy vita amin'ny tontolo iainana sy ny fonosana tsy manara-penitra dia hiteraka fahalotoan'ny tontolo iainana eto an-tany. Androany, ny indostrian'ny fonosana dia miatrika "revolisiona maitso", manolo ny fandotoana ny m ...
Andao hanao lalao fanimbana mololo
Ny plastika dia voatanisa ho iray amin'ireo famoronana lehibe indrindra tamin'ny taonjato faha-20. Ny plastika dia toy ny sabatra roa lela. Na dia mitondra fanamorana ho antsika aza izy io, dia mitondra enta-mavesatra koa ho an'ny tontolo iainana. Mba hisorohana ny fandotoana fotsy, ny firenena isan-karazany dia namoaka ...
Rehefa avy mamaky an'io dia sahy misotro ve ...
Ho an'ny olona maro, ny fanombohana tsara dia ny antsasaky ny ady. Ny asa maraina dia manomboka aorian'ny kapoaky ny kafe mafana ... Amin'izao fotoana izao, ny kafeinina dia mamatotra mpandray receptor iray ao amin'ny ati-doha, ka mahatonga ny ati-doha tsy afaka mahazo signal "reraka", noho izany dia manome tosika ny herin'ny herin'ny olona. Howe ...
Mandehana ao amin'ny milina famolahana APP ary jereo ny fomba ...
Avy amin'ny fanovana majika avy amin'ny hazo ka hatramin'ny taratasy, inona ny fizotrany nandalovany ary inona no karazana tantara nananany? Tsy asa mora io. Tsy misy sosona maromaro ihany, fa misy fari-pitsipika avo lenta sy fepetra takiana hentitra koa. Amin'ity indray mitoraka ity, andao isika hiditra ao amin'ny vovonan'ny pulpan'ny APP hijerena t ...
Zero taratasy kaopy plastika azo TÜV ...
Tamin'ny 25 May, ny filoha lefitra zokin'ny TÜV Rheinland Greater China dia namoaka mari-pankasitrahana momba ny zezika indostrialy DIN CERTCO sy Eoropeanina Bioplastika Association ho an'ny Taratasy Indostrialy APP Sinar Mas Group. Ny vokatra voamarina dia ilay taratasy fampiasa taratasy Zero Plastic® vao novolavola an'ny APP Si ...
Midira amin'ny Gazetintsika